Indlela usethe ikhamera Web ngelephuthophu
Uma udinga ukuthola impendulo yombuzo othi "indlela ukusetha i-webcam kukhompuyutha ephathekayo" - indlela, cishe, kunenkinga ethile ukuba ixazululwe. izinkinga ezinjalo zingase zibe eziningana:
Ikhamera akusebenzi ngaso sonke, kufanele usethe;
Ikhamera usebenza, kodwa akamuhle kumele (isithombe sibheke phansi, njll);
Ikhamera usebenza, kodwa ikhwalithi yesithombe onganelisekile;
Ikhamera usebenza, kodwa ngifuna ukudlulisa ukusebenza walo (photo shoot, ividiyo, processing image, izwi ukuqopha nge-microphone, nokunye okunjalo).
Mhlawumbe lena akuyona uhlu oluphelele lwazo zonke izinkinga, kodwa lokhu kubonisa main izindaba eziphuthumayo ochungechungeni "indlela yokumisa uhlelo yewebhu eyakhelwe phezu laptop."
I-Laptop - akusiwona nje ucezu plastic nge screen amancane kweqembu nice izinkinobho ezahlukene. Abadali yalesi simangaliso sebenamashumi isikhathi esiningi nokuzikhandla ukuze sikwazi ukuqinisekisa ukuthi iningi "eyayigcwele" kuye ngazo zonke izinhlobo zezinto zobuchwepheshe. Noma yimuphi ubuchwepheshe, kungakhathaliseki ukuthi cool kungase futhi Nokho kakhulu ke zingakubiza, ngezikhathi ezithile bangase benze futhi ibange umnikazi sobubanzi okuxubile omkhulu wokudlulisa imizwelo. Ngakho ungakhathazeki uma isilwane sakho akuyona iziphethe njengoba kufanele. Akukona scary, ukuthi ngayo.
Ukuze ukhethe "imithi" kwesokudla - kubalulekile, okokuqala kunakho konke, ukuxilonga kahle. Lapha, manje ujike.
1. Indlela usethe webcam kukhompuyutha ephathekayo, uma ikhamera akusebenzi ngaso sonke.
Wena ungayisebenzisi webcam on laptop yami, futhi manje le sadingeka. Masiqinisekise ukuthi webcam ivuliwe uhlu imishini efakwe laptop. Ukuze wenze lokhu kudingeka:
Thola isithonjana "Computer yami", chofoza ngakwesokudla, ukhethe uhlu "Management";
Esikhathini ngakwesokunxela ukuthola "Isiphathi sedivayisi" kukholamu efanele chofoza cross eduze eliqoshwe umbhalo othi "Amadivaysi Imaging";
Lapho, ngo-theory, kufanele kube ikhamera yakho.
Nakho lapho noma akusiyo khona - ". Universal ukwelashwa" watch bese ulandela izinyathelo
izinqubo Universal wezokwelapha: Ukufaka / ufaka umshayeli webcam. Ukuze wenze lokhu, ususe ubudala (uma ngabe zikhona) bese ufake amasha.
Ukususa abashayeli ubudala: usuphinda letichazwe lapha ngenhla (nto 1 - into 3), chofoza kabili igama ikhamera kuzovula iwindi lapho ukhetha ithebhu "Umshayeli". Push "Susa" futhi uqinisekise ukususwa.
Ukufaka abashayeli ezintsha: Faka umshayeli disk (ezifakwe notebook) ku disk drive, ukusebenzisa, thola khona ifolda Webcam futhi ufake umshayeli kusukela lapho. Uma disc akuyona - uwalanda ku umkhiqizi indawo nouta.
Uma izenzo zakho ayinawo imiphumela kulindeleke - uxhumane sesevisi. Cishe, lokhu kuyinkinga hardware.
2. Indlela set up webcam kukhompuyutha ephathekayo, uma ikhamera imisebenzi, kodwa okungukuthi akamuhle Kufanele (isithombe sibheke phansi, njll)
Uma kukhona "glitches" ku-webcam kunconywa ukusebenzisa "Universal izinqubo zokwelapha" ezichazwe ngenhla. Uma abazange basize - uye kuwebhusayithi yomenzi, download inguqulo yakamuva ye umshayeli "Webcam" bese uphinda "elapheke" inqubo ukufakwa abashayeli "fresh".
Uma yakho izenzo Ningamniki olulindelekile Imiphumela - contact sesevisi. Cishe, lokhu kuyinkinga hardware.
3. Indlela usethe webcam kukhompuyutha ephathekayo, uma ikhamera isebenza, kodwa ikhwalithi yesithombe ngeke kumjabulise.
Kulokhu, njengoba isisho, "imithi ayinamandla." Lesi simo kungaba ukufakwa efanele webcam zangaphandle, udinga ukuthenga futhi ufake. Ngenhlanhla, kukhethwa manje abangaphezu kuka ububanzi. Kungcono uma uthenga esitolo ukuze uqinisekise ukuthi uthole ncamashi okudingayo: i-webcam entsha weneliseka izinga isithombe futhi umsindo. Ideal - ukuletha laptop yakho futhi khona lapho ukuhlola ukuthenga esizayo.
4. Indlela usethe webcam kukhompuyutha ephathekayo, uma ikhamera isebenza, kodwa ufuna ukwandisa ukusebenza yayo.
Kulokhu kuzosiza ukufakwa software olwengeziwe. Amakhamera wewebhu ukuthi umenzi elifakwe laptop, njengoba umthetho, asikwazi kushintshwe. Kodwa isofthiwe third-party kungaba ngokuphawulekayo ukunweba ukusebenza esakhelwe "webcam."
Uma ASUS - I batusa ukuba banake LifeFrame Umbuso enhle noma analogue yayo. Thwebula izithombe, ividiyo, impatho etholakalayo nemiphumela ezikhethekile, umsindo umbhobho - konke lokhu ngokuqinisekile wusizo kuwe emsebenzini wakho noma ukuzijabulisa.
ASUS K55VJ: Uhlolojikelele nezici laptop
Kanjani ukuze uthole imvume abazingeli izikhali? Phinda yokubhalisa ukuzingela izikhali